Xiisado dagaal oo ka taagan duleedka Marka iyo dagaalka oo uxuubsiibtay arin qabiil |
Xiisado dagaal oo ka taagan duleedka Marka iyo dagaalka oo uxuubsiibtay arin qabiil
Wararka ka imaanaya degmada Marka ee xarunta gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya saaka halkaasi inay ka taagantahay Xiisad dagaal iyo Kacsanaan, taasoo u dhaxaysa Ciidamo ka kala tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya oo lakala saftay labada nin ee isku haya Maamulka Magaladaasi.
Guddoomiyaha dhinaca Amniga ee degmada Marko Cabdisalaan Max,ed Cabdulle ayaa sheegay goor hore oo shalay ah in Ciidamaddiisa weerar ay kusoo qaadeen Malayshiyaad kasoo jeeda garabka kale ee ay isku hayaan gacan ku haynta Magaalada.
Xiisadahan ayaa yimid kadib markii la isku qabtay Maamulka Magaalada, waxaana ilaa iyo hadda aan arintani soo kala dhex galin Dowladda Federaalka Soomaaliya oo u muuqata iyado inay ka cagajiidayso arimahan murugsan ee ka taagan degmada Marka.
Mid Kamd ah dadka deegaanka ayaa sheegay in xiisado iyo dhiilo Colaadeed inay ka taagantahay Magaalada Marka, wuxuuna sheegay hadii ay arintu sidaan kusi socoto inay isku badali doono dagaal Culus oo dhex mara labada Malayshiyo Beeleed ee huwan shaarka Dowladda.
Marar badan ayaa duledka Marka waxaa ka dhacay dagaalo gaystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac mana jiro wax ay ka qabatay dowlada Sooomaaliya.